I-Samoan Tattoo-Imfashini kunye neTrends yamadoda aSisitayile | Amadoda aQinisekileyo
UAlicia tomero | | Ukunyamekela, fashion, Imizila
I tattoo yaseSamoa luphawu lwemizobo yayo engaphezulu nangaphantsi kunye nemigca enemvelaphi emnyama. Imilo yabo yimigca yejometri kwaye badume ngokuza kwingingqi yeSamoa, okoko ubomi bayo kunye nenkcubeko yayo yenze ukuba ukwenziwa kwayo kubalasele kwaye kwahluke.
Inkqubo esetyenziswe kula mazwe icaciswe ngendlela enzima nangesandla, ubunzima bayo kunye nentlungu ayinanto yakwenza nezo zenziwe ngaphakathi kwenkcubeko yethu yasentshona, kunye nendlela yenaliti yanamhlanje. Usenokuba uqaphele ukuba zininzi iitatoo zaseSamoa esele zenziwe ngoku, ezigubungele imiqolo, iingalo kunye nemilenze yesiqingatha.
1 Imvelaphi yeTattoo yaseSamoa
2 Intsingiselo yayo
3 Imizobo kunye neemilo kwinkcubeko yabo
4 I tattoo yaseSamoa eNtshona
Imvelaphi yeTattoo yaseSamoa
Igama layo livela kwigama lengingqi yeSamoa, iqela leziqithi ze-archipelago yaseMpuma Polynesia, ilizwe lokuqala lamaMaori. Kule ndawo, ii-tatoo ezenziwe ngezandla apho kwasetyenziselwa khona amathambo abukhali ukufakela i-inki phantsi kolusu.
La mathambo abotshwe ngentonga abethwa yenye intonga ukuze ukumitha i-inki edityanisiweyo kubo phantsi kolusu. Obu buchule busebenza nzima kwaye buhlungu, i-icon yesibindi kunye nesibindi. Kuthatha iinyanga ukuphilisa kwaye iseshoni nganye inika isenzo sobukhalipha.
Inkosi ye tattoo ebizwa ngokuba yi "tafuga" nkxuza la mathambo abukhali nge-inki emnyama eyenziwe ngomlotha osuka kwiqokobhe lekhokhonathi ezitshisiweyo. Ke ngohlobo lwesando okanye somthi, iyabetha kwaye igqobhoze ulusu ukuze le inki ingene.
Abantu baseSamoa baqala ukuzidweba kumvambo wokufikisa kwaye Kuthatha iiveki ukuya kwiinyanga ukuba umvambo omkhulu ubesemthethweni. Kungenxa yokuba ubuchule bayo buyacotha kwaye ukusikwa kwe-inki esikhumbeni ngethambo kubuhlungu kakhulu kunendlela yesiqhelo yenaliti esiyaziyo. Emva kweseshoni ulusu kuye kwafuneka luvunyelwe ukuba luphumle ukuze lubuyele emanxebeni Kungenxa yoko ukufezekiswa kwayo kusemva kwexesha.
Uyilo lwamaSamoa ludlulela ngaphaya kokuba kukukrola okulula kulusu. I tattoo yabo ibonisa uluntu abangabo, imbeko yabo kwinkcubeko yabo kunye nembeko ebhekise kuyo. Liqhayiya labo lokuba le ndalo ihlanganiswe emzimbeni wabo.
Isiqithi ngasinye sinoyilo lweempawu ezibonakalisa abantu baso, kungoko umahluko phakathi kwabo unokwenziwa. Nangona bebonisa ngokuzingca ukumelwa kwabo, ngenxa yemvelaphi yenkcubeko eyenzekayo kolu hlobo lwe tattoo kwezinye iinkcubeko, Ukuthatha inxaxheba kwabantu baseSamoa ekumeleni imizobo yabo kuyalahleka. Oku kungenxa yemvelaphi yenkcubeko enikwa olu hlobo lweetatto kwezinye iinkcubeko kwaye kubo luphawu lokudelela.
Imizobo kunye neemilo kwinkcubeko yabo
Umvambo waseSamoa ibonakaliswe ngoyilo lwemigca kunye neemilo zejiyometri. Uninzi lwale migca inobungakanani obucekeceke okanye obungqindilili obunombala omnyama ophawulweyo.
Amadoda anxiba umvambo waseSamoa obizwa ngokuba yiPe'a egubungela indawo enkulu yomzimba kwaye ibhalwe umvambo ukusuka enkabeni ukuya emadolweni. Imizobo yakhe ziifom esizijongileyo ngaphambili, kunye nemigca yejometri emele ubomi bakhe, inkcubeko kunye nezithethe zaseSamoa.
LAbafazi banxiba umvambo wesintu waseSamoa obizwa ngokuba nguMalú ngemigca elula ngakumbi neemilo. Ayinawo la maphawu amnyama aphawulwe kodwa amanqaku nje amancinci afuzisela iinkwenkwezi okanye ukumelwa kwezilwanyana zaselwandle, imizobo yayo ibhalwe amathanga.
I tattoo yaseSamoa eNtshona
Olu hlobo lwe tattoo eNtshona lubonisa olunye uhlobo lokumelwa kuba ujonge nje indlela yobuhle yokuyinxiba njengomhombiso. Akukho khuseleko olusisigxina oluchaza ukutolika okukhuselekileyo kwinto abanokuyithetha ngayo, uninzi lwazo luhleli nje.
Olona phawu luqhelekileyo nolusetyenzisiweyo luqala kumzobo weKoru, enobume bokujikeleza kwaye obufanekisela ukukhula kunye nemvisiswano yangaphakathi. Umzobo wehei matau imilo yegwegwe, okanye iManaia emele umgcini wokomoya, nentloko yentaka, umzimba wendoda kunye nomsila wentlanzi.
I tattoo emile njengelanga Ufuzisela ukukhanya, isibindi kunye namandla. Ezenziwe njengentyatyambo Zihlala zitsaliwe esinqeni nasemagxeni, zimele ubuhle kunye nobomi obungunaphakade.
Iifom zezizwe zezona ziimpawu zenkcubeko yethu kwaye zibaluleke kakhulu. Abathandi bolu hlobo lokubheja itattoo ekubabekeni emagxeni besenza umzobo omkhulu ukugqiba indawo yeengalo. Gqamisa uyilo lweMaui, umnqamlezo wemarquise emele umnqamlezo obonisa uxolo kunye nokulingana. Y Ufudo olukhulu, isilwanyana somhlaba kunye namanzi esalatha indlela eya kwisiphelo saphakade xa sidlulile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Umvambo weSamoan
Esona siqholo siphumelele kule minyaka idlulileyo
Indlela yokudlala ngothando kwi-Intanethi